उत्तर आधुनिक दुर्व्यसन - Vishwa News | Popular Nepalase News Media In USA
मार्क जुगरबर्ग आफैं कलर ब्लाइन्डनेस (रंगहरु छुट्याउन नसक्ने एक प्रकारको रोग) ग्रस्त छन् नै । तिनको सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले दुनियाँ ब्लाइन्ड (दृष्टिविहीन) बनाउँदै लगेको छ । दुनियाँका लागि एचआईभी एड्स, अर्बुद, संक्रामक भाइरस, बढ्दो विश्वव्यापी तापमानभन्दा ‘फेसबुक एडिक्सन डिसअर्डर खतराजन्य रोग र समस्या
अनुसन्धानले देखाएकै छ लागूपदार्थ दुव्र्यसनी र ‘डिजिटल स्मार्ट दुव्र्यसनी’ दुबैको मस्तिष्कको एउटै भाग उस्तै प्रकारले सक्रिय हुने रहेछ । एउटा फेक न्यूज बन्छ, त्यसैलाई आँखा चिम्लेर अनलाइनले अझ उत्तेजकशैली दिन्छ । प्रयोगकर्ता त्यसलाई आँखा चिम्लेर शेयर गर्छन् । उसको सञ्जाल त्यसैमा जोडिन्छ । सञ्जालको जञ्जाल एक कान दुई कान मैदान हुँदा मिनेटमै भीड बन्छ । सकेसम्म यो भीडको कम सम्पर्कमा रहे कम संक्रमित हुन सकिन्छ ।
मार्क जुगरबर्ग आफैं कलर ब्लाइन्डनेस (रंगहरु छुट्याउन नसक्ने एक प्रकारको रोग) ग्रस्त छन् नै । तिनको सामाजिक सञ्जाल कम्पनीले दुनियाँ ब्लाइन्ड (दृष्टिविहीन) बनाउँदै लगेको छ । दुनियाँका लागि एचआईभी एड्स, अर्बुद, संक्रामक भाइरस, बढ्दो विश्वव्यापी तापमानभन्दा ‘फेसबुक एडिक्सन डिसअर्डर खतराजन्य रोग र समस्या बन्दै छ ।
फेसबुक भन्छ– हरेक सेकेन्ड पाँच नयाँ प्रयोगकर्ता बढिरहेको छ । हरेक दिन कम्तीमा ३० करोड तस्वीरमा र प्रतिमिनेट ३ लाख स्ट्याटसमा ५० हजार प्रयोगकर्ता बाँधिइरहेका छन् । विश्वको झण्डै आधा जनसंख्या फेसबुक संक्रमणको शिकार छ । दैनिक सवा अर्ब जनसंख्या फेसबुकमा झुण्डिन्छन् । गत वर्षको तथ्याङ्कअनुसार १४–३९ वर्ष उमेरसमूहको ६० प्रतिशत यो कुलतमा रहेछ । नेपालको जनसंख्याको तीन गुणा (१० करोड) त फेक अकाउन्ट नै रहेछ । पछिल्लो वर्ष मात्र ७८ हजार फेकन्यूजले दुनियाँलाई बेवकुफ बनाएछ । यही फेक अकाउन्ट र फेक न्यूज प्रवाह अहिले विश्वको टाउको दुखाइ बनिरहेको छ । यसैले आज यता बसियो ।
प्रवक्ताले भने– नियमन चाहिन्छ
सरकारका प्रवक्ता एवम् सूचना तथा सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले साताअघि सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न आवश्यक रहेको बताए । सरकारविरुद्ध ट्रोल, व्यङ्ग्य छायो । सबैले बिर्सिए सामाजिक सञ्जालमा छाएको ‘फेक न्यूज’बाट कसरी दुनियाँ शिकार कसरी भइरहेको छ, किन विश्व सुरक्षा र गोपनीयताको चिन्तामा सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण गर्ने कानुन बनाउन प्रयत्नरत छ ? व्यक्तिगत, वाक तथा अभिव्यक्ति र सूचनाको स्वतन्त्रताको पक्षपोषण गर्ने, मानवअधिकारका चर्का कुरा गर्ने विश्वका उदारवादी भनिएका देशहरु नै कसरी ‘फेक न्यूज’ र सामाजिक सञ्जालको चक्रब्यूहबाट बाहिर निस्कन प्रयत्नरत छन् भनेर उनीहरुले खोज्ने प्रयत्नै गरेनन् । प्रयत्न गर्थे होलान् त बेलायतको कुरा गर्थे होलान्, जर्मनीको कुरा गर्थे होलान्, छिमेकी भारतकै पनि कुरा गर्थे होलान् । तर गरेनन् । किनकि, उनीहरु ट्याब्लेट र स्मार्टफोन बोकेका ‘स्मार्ट बेवकुफ’ मात्र हुन् जो छाडापनलाई स्वतन्त्रताको अर्थमा बुझ्छन् । तिनलाई स्वतन्त्रताको अर्थ एक्लै रमाउनु र मन परेको गर्न पाउनपर्छ भन्ने मात्र छ । झूटको झाडीमा हराउने र वाहियात लोकप्रियताको कसीमा तौलनेलाई यो स्वतन्त्रता अत्यधिक प्रिय लाग्दोरहेछ । तर, मानवीय मूल्य र मान्यतामा यसले पारेको असर नलेख्ने, सामाजिक अराजकता र अपराधको बढ्दो आयाम नदेख्ने हुँदो रहेछ । यसबाट चाहिँ तिनीहरु भाग्दारहेछन् । ‘फेक न्यूज’ विस्तारको टुक्रालाई उनीहरुले भ्रष्टाचार र स्वेच्छाचारविरुद्ध बोल्ने स्वतन्त्रतासँग दाँज्ने टिठलाग्दो गरिबी देखाए उनीहरुले ।
‘फेक न्यूज’को व्यथा
सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको नेपाली पुस्ता दुइटा विषयमा पक्का जानकार छ । पहिलो म्यानमा (बर्मा)को रोहिङ्ग्या शरणार्थी र, दोस्रो सिरिया मामिला । दुबै खबरको जड ‘फेक न्यूज’सँग जोडिएको चाहिँ कमै जानकारी छ । म्यानमामा एक बौद्धमार्गी महिलालाई प्रभावमा परेर ‘फेक न्यूज’वालाले प्रहरीमा उजुरी लेखाए कि उनलाई दुई मुस्लिम युवकले जबरजस्ती गरे । समाचार फैलियो, भोलिपल्टै प्रदर्शन शुरु भो । सरकारले अस्थायी रुपमा फेसबुक बन्द गरायो । जातीय हिंसाको यो फेक खबरको शिकार लाखौं रोहिङ्ग्या मुसलमानले शरणार्थी बनेर तिर्नुप¥यो ।
उता, सिरियाली राष्ट्रपति वसार अल असादले नागरिकमाथि रासायनिक हतियारले आक्रमण गरेको ‘फेक न्यूज’ यति शक्तिशाली बन्यो कि हामीले भित्तो त रङ्ग्यायौं नै गालामा रंग पोतेर ‘असाद ... मुर्दावाद् !’ पनि भन्यौं । सामाजिक सञ्जालले दुनियाँको विवेक कसरी हडपेको छ भन्न यही उदाहरण बलियो छ ।
हिलारी क्लिन्टनलाई पार्किन्सन्स रोग लागेको खबर होस् वा आतंकवादी संगठन आईएसआईलाई एञ्जेला मर्केलले यूरोपमा अनुमति दिने घोषणा, ‘फेक न्यूज’ले दुनियाँको सरकार र सत्तालाई नै असहज बनाइदियो । अमेरिकाको टेक्सासमा इबोला भाइरस भेटिएको फेक खबर नेपाली टेलिभिजनमा समेत मज्जाले बज्यो ।
जर्मनीमा भएको एक अध्ययनले त्यहाँको दक्षिणपन्थी पार्टी अल्टरनेटिभ फर जर्मनीले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस पोष्ट गरेपछि शरणार्थीविरोधी गतिविधि असामान्य रुपमा वृद्धि भएको देखायो । एउटै झूटो खबर पत्याएर गतवर्ष खेमनित्स शहरमा भएको हजारौंको प्रदर्शन फेकमा टुंगियो । भारतमा हिन्दू–मुस्लिम, भारत–पाकिस्तानलाई उत्तेजित बनाउने फेक न्यूजको बाढी नियन्त्रण गर्न सबैभन्दा धेरै ‘फ्यान फलोअर्स’ भएका राजनीतिकर्मी नरेन्द्र मोदीले पनि सकिरहेका छैनन् । मलाई त भारतीय सञ्चारमाध्यम आफैं ‘क्राइम सिन’जस्तो घीन लाग्छ, ‘फेक न्यूज’को के कुरा !
नेपाली समाजमा मूलतः तीन विषय अस्थिरतामा लैजान सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग बढ्दो छ । जात, धर्म र राजनीतिक विचारधारा । जातीय विद्वेष, सांस्कृतिक चुनौती र राजनीतिक द्वन्द्व तीनै कुराका लागि सामाजिक सञ्जाल हतियार हुने अभियान बढ्दो छ । अत्यन्त तल्लो स्तरमा नङ्ग्याउने, बङ्ग्याउने र त्यसलाई सामाजिक सञ्जालमा छर्ने रोगले महामारीको रुप लिंदै छ । कुँडाकर्कटमा फाल्न मिल्ने हजारौं ‘अनलाइन पोर्टल’ नियमन गर्न नसक्दा अराजकता मौलाउँदो छ । सयौं यूट्युब च्यानल चर्पीभन्दा पनि फोहोर र घिनलाग्दा छन् । समर्थक र विरोधीका नाममा खडा गरिएका संगठित समूह लागूऔषध दुव्र्यसनभन्दा बढी विषाक्त देखिएका छन् । सामाजिक सञ्जाल सामाजिक अपराधको जड र विकृत मनोरोगको भट्टी बन्दै छ । र, मान्छेहरु भन्छन्– सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्नु स्वतन्त्रताको खिलाप हो । होइन, सामाजिक सञ्जाल नियमन र नियन्त्रण गर्नु आवश्यक मात्र होइन अनिवार्य छ ।
व्यक्तिको आत्मपरक काममा राज्यको हस्तक्षेप आवश्यक छ ? छ ।
व्यक्तिवाद र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको शास्त्रीय सिद्धान्तले जुकरबर्गकालीन समाजमा काम गर्छ ? गर्दैन ।
मिलले लोकमतलाई सहनशील, मतमतान्तरको महत्व दर्शाउने र मानवीय ज्ञान अभिवृद्धि गर्ने रुपमा व्याख्या गरेका थिए । आजको ‘फेक न्युज’कालीन संसार यो स्वतन्त्रतालाई घृणाभाव फैलाउने, सहिष्णुता भाँड्ने, एकता खण्डित गर्ने अभियानमा छ । यसैले अराजक स्वतन्त्रताले नै व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा कैंची लगाउन पर्ने परिस्थिति माग गर्छ । लगाउनुको विकल्प राज्यसँग छैन ।
स्वतन्त्रताको पुलमा हिंड्नु व्यक्तिको अधिकार होला । पुल असुरक्षित छ, तर हिंड्ने व्यक्तिलाई उक्त असुरक्षाबारे थाहा छैन भने उसलाई अघि बढ्नबाट रोक्नपर्छ । खोला तर्न दिनुको अर्थ नागरिकलाई जोखिममा पर्न दिनु होइन, उसको सुरक्षा राज्यको दायित्व हो, कर्तव्य हो । यो अवस्थामा खोला तर्न पाउने व्यक्तिको अधिकारमाथि अंकुश लगाउनु जायज हुन्छ । मिल यही भन्छन् ।
जनताले लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्नुको अर्थ समाजमा निकृष्ट र आपत्तिजनक विचार प्रवाह गर्ने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता चाहिन्छ भन्छन् । उपयोगवादी हुनुको अर्थ अनैतिक वा छाडा हुनु हो ? यसर्थ, स्वतन्त्रतालाई अनैतिक रुपमा दुरुपयोग गर्नेमाथि नियन्त्रण आवश्यक र जायज दुबै छ । अरुको आत्मसम्मानको भावना र व्यक्तिगत गरिमामाथि आघात पार्ने प्रवृत्ति स्वतन्त्रताको अर्थभित्र पर्छ ? शास्त्रीय उदारवाद र स्वतन्त्रताको वकालत गर्दागर्दै मिलले पनि आफ्नो विचारमा संशोधन गरे कि सामाजिक हितका लागि स्वतन्त्रतामा अंकुश लाग्न सक्छ । यहाँ त जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति, सम्प्रदायमाथि अनैतिक विषयवस्तु सृजना गरी संगठित आक्रमण गर्ने अभ्यास व्याप्त छ । यसैले राज्यले अराजक स्वतन्त्रतामाथि कैंची लगाउन आवश्यक र जायज दुबै छ ।
बहुमतलाई जति बोल्ने अधिकार हुन्छ, अल्पमतलाई पनि त्यत्तिकै अधिकार प्राप्त छ । तर, झूटको प्रचारले सत्य अझ मुखरित भएर आउँछ भन्नु दुई सय वर्षअघिको कोरा आदर्श मात्र हो । किनकि, त्यतिबेलासम्म समूह, समाज अराजक र मूठभेडको बाटोमा गइसकेको हुन्छ । द्वन्द्वको खेती मौलाइसकेको हुन्छ । भीड अनियन्त्रित भइसकेको हुन्छ । किनकि, यो मिल (जेएस)कालीन समाज होइन, जुकरबर्गकालीन ‘फेक न्युज’, ‘फेक सूचना’को संसार हो, जसको सम्मोहनमा विश्वको आधा जनसंख्या विक्षिप्त छ ।
संसारमा प्लेग र हैजाको महामारी धेरैपटक फैलियो । चीनबाट फैलिएको द ब्ल्याक डेथ (१३३४) नामको प्लेग महामारीले पूरै यूरोप कज्यायो , एभिएन फ्लू (१९५७)बाट बीसौं लाख मान्छे मरे । टाइफुस ज्वरो (१९४५)ले विश्वयुद्धमा बचेका ३० लाख रुसी नागरिकको ज्यान लियो । जस्टिनियन प्लेगले त्यतिबेलाको विश्वको तीन करोड व्यक्ति मारेका अनुमान छ । ठीक सय वर्षअघिको संक्रामक फ्लू पहिलो विश्वयुद्धभन्दा विनाशकारी भएर आयो र चार करोडभन्दा बढीको ज्यान लिएर सेलायो । परारै स्वाइन फ्लू आयो, पोहोर फेरि इबोला संक्रमण भित्रियो । यी त महामारी र रोग भए जसको असर शरीरमा देखिन्छ र उपचार उपलब्ध नभए ज्यान जान्छ । अहिलेको महामारी झूटा खबर वा फेक न्यूजको हो, जसले कुनै पनि बेला कुनै पनि कुनामा रक्तपात निम्त्याउन सक्छ । यसैलाई उत्तरआधुनिक महामारी भनिएको हो । फेक न्यूज र सामाजिक सञ्जालको सम्मोहनमा परेको समाज नैतिकता र विवेक गुमाएर खतरनाक स्वतन्त्रताको बन्दी बनिरहेका बेला दुर्घटनाको जोखिम सधैं रहन्छ ।